रोग र शोक अन्त्य गर्न योग – News Portal
रोग र शोक अन्त्य गर्न योग
June 19, 2019 epradeshLeaveaComment on रोग र शोक अन्त्य गर्न योग
तुलसीपुर, ४ असार । मानव जीवनमा रोग र शोकबाट मुक्ति पाउन योग अभ्यास अनिवार्य भएको एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले जोड दिएका छन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ र ७ को गैराखाली हरियाली सामुदायिक वनको भवनमा सञ्चालित योग शिविरको मंगलबार भएको समापन कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले शरीर र मनलाई स्वथ्य राख्नका लागि दैनिक योग अभ्यास गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
कार्यक्रमका बक्ताहरुले पछिल्लो समय विभिन्न कारण मानिस शारीरिक र मानसिक रुपमा अस्वथ्य हुँदै गएकाले पनि योग अध्यास अनिवार्य भएको बताए ।
उनीहरुले योग कुनै धर्मसँग भन्दा पनि विज्ञानसँग सम्बन्धित भएकाले यसको दायरा फराकिलो भएको स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा पतञ्जली योग समिति प्रदेश नम्बर ५ का प्रभारी प्रेम शाहले गाउँ–गाउँमा योग चेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि शाहले क्षमता वृद्धि, लक्ष्य प्राप्ति, मन शान्ति र स्वथ्य जीवनका लागि योग अनिवार्य रहेको बताए ।
गैराखाली सामुदायिक वनका अध्यक्ष नोखी रावतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पतञ्जली योग समिति ५ नम्बर प्रदेशका महासचिव घनश्याम अधिकारी,
बरिष्ठ योग प्रशिक्षक तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ का अध्यक्ष टोप बहादुर केसीलगायतले मावन स्वास्थ्यका लागि योगका बिषयमा धारणा राखेका थिए ।
कार्यक्रमको सञ्चालन पतञ्जली योग समितिका वडा सहसंयोजक दुर्गाप्रसाद भण्डारीले गरेका थिए । जेठ २९ गतेदेखि सञ्चालित शिविरको मंगलबार समापन गरिएको हो । समापनका अवसरमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरिएको योग शिक्षक सन्तोष भण्डारीले जानकारी दिए ।
शान्तिनगरमा रोजगार कार्यक्रम शुरु
पोखरीमै लाखौका माछा मरे